Daniela Smaitch, waa hooyo seddex caruur leh oo waaweyn, waxay ku dhalatay Bulgaria waxayna ku nooleyd Jarmalka tan iyo 2007. Iyadu waa farsamo yaqaan oo tababbaran qeybta mekaniga. Iyada oo la aqoonsan waye shahaadada Bulgaria ee Jarmalka, waxay tan iyo markaas ka shaqaysay shirkad qaab-dhismeedka iyo daryeelka caruurta ayada oo madax-bannaan.
Isla marki, Daniela waxay kor u qaadday xirfadeed iyo shaqsiyadeed iyada oo ku saleysan is-wax u dhigasho waxayna ku dhammaysay koorsada IHK ee dhexdhexaadiyeyaasha luqadda. Kadib markay si guul leh u xaqiijiso heerka C2 ee luuqadda Jarmalka machadka Goethe, waxay heshay shahaadada oo ah turjubaan sharci ahaan la aqoonsan yahay iyo turjubaan luqadda Bulgaria ah. Sidaa darteed, soo-saarista runta ah iyo taxaddarka leh ee qoraalka iyo hadalka iyo ilaalinta xuquuqaha kuwa ku hawlan hawsha waxay qayb ka yihiin hawl-maalmeedkooda.
Luqaddaha: Bulgarian, Croatian, Macedonian